Indlela yokupheka ukudla kwasekuseni okusheshayo nokunambitheka kuwo wonke umndeni, uma ulinganiselwe ngesikhathi futhi ugijime ukusebenza noma unayo izinto ezibaluleke kakhulu ukuzenza? Sizozama ukuthola isixazululo kule nkinga. Kulesi sihloko, ngazama ukuqoqa iseluleko esibaluleke kakhulu sokulungisa kwasekuseni kusuka izitsha okumnandi, ezilula ngokusho iresiphi.
Okuhle futhi okubaluleke kakhulu, ukudla kwasekuseni okusheshayo kuyisiqinisekiso sosuku oluhle, kokubili wena, nomyeni wakho nomntanakho.
Uma ungazi ukupheka, yenza isamba esincane semikhiqizo esiphelile, ongayilungiselela ngokushesha ukudla kwasekuseni. Manje awudingi ngempela ukuphazamisa ukuthi ungakwenza kanjani ukudla kwasekuseni okusheshayo futhi okuhlwabusayo, uma kuqhathaniswa nalabo besifazane abahlala phakathi nekhulu leminyaka elidlule. Imaminithi engu-10-15 kuphela ku-microwave futhi isidlo sasekuseni sakho silungele ithebula. Yiqiniso, ukudla okunjalo kunomphumela owodwa. Injabulo yokulungiselela ukudla kwasekuseni ingadlulisela ipenny enkulu. Uma ufuna ukusindisa ngezindleko zasekuseni, ngakho-ke lesi sihloko sibheke kakhulu kuwe.
Okungabizi kakhulu ngesikhathi kanye nemali yokulungiselela ukudla kwasekuseni yisidlo esibizwa nge-omelet.
Ukuze silungiselele i-omelet yekusasa, sidinga amaqanda amathathu, amahishi, i-bulb, izinongo, izinongo ozithandayo namafutha amancane we-sunflower. Hlanganisa zonke izithako: amaqanda, ubisi (1 inkomishi) epulatifeni, uzihlwitha ngemfoloko. Bese usithulule ingxube epanini elishisayo lokushisa, ugcobe ngamafutha. Ngemuva kwemizuzu engu-5, isidlo silungile, futhi ungahlala phansi ukuze uthole isidlo sasekuseni nomndeni wakho. Lokhu, mhlawumbe, yiyona iresiphi engcono kunazo zonke, ukupheka ukudla kwasekuseni okusheshayo nokuhlwabusayo.
Ngendlela, ungakwazi futhi ukupheka i-croutons yekusasa. Ukuze wenze lokhu, ufakwe enhlanganisela yamaqanda amnandi okhethwe usawoti kanye nezinongo ukunambitha, izingcezu zesinkwa uphinde uzifake epanini. Kholwa ukuthi akulula ukulungisa isidlo sasekuseni esisheshayo futhi esiphundu, kodwa indlu izohlala, iyanelisekile.
Ngidinga ukupheka kwasekuseni ngokushesha. Futhi ngokuvamile ngiyakuthanda ukwenza isitifiketi itiye itiye kwasekuseni. Ukuze ngibapheke ngisebenzisa ama-sausage abilisiwe, ushizi, imayonnaise noma ukhilimu omuncu, ham, utamatisi, ukhukhamba - kufushane konke okungaxoshwa ngokushesha esiqandisini, ukusika ngokushesha nokukhonta etafuleni.
Ngakho-ke, ingane yami, ngivame ukukhonza ama-sandwich okudla kwasekuseni ngezinhlobonhlobo zokugcwalisa ukudla kwasekuseni. Ukwenza lokhu, ngidinga ukulungisa ngaphambi kokulungisa amamangwe asekhaya asetshenzisiwe ekhaya engizisebenzisa ukuze ngimenzele ukudla kwasekuseni okusheshayo futhi okumnandi emizuzwini emihlanu. Ungase futhi ulungiselele ngokushesha ama-pancake ukuze uthole isidlo sasekuseni uma unenhlama kubo kusihlwa. Izingane ngokuvamile zithanda ukupheka ekhaya okuhlukile, ongawapheka kusihlwa futhi usebenzise njengokungeza ukudla kwasekuseni. Ekubhaka, ungafaka ezihlukahlukene amajikijolo nezithelo ukunambitha. Futhi uma kungazelelwe ingane yakho ikhononda ngokuntuleka kwesidlo sasekuseni, bese umnika ukudla kwasekuseni ibhanana, noma ezinye izithelo.
Ukuze ungakhathazeki ngokuthi ungakwenza kanjani ukudla kwasekuseni okuhlwabusayo futhi okusheshayo, ungasebenzisa ubuqili. Lungisa isidlo sakusihlwa nge-stock, khona-ke uyohlale unenketho yokuphumula ongayithumela ngekusasa, uma usuphuzile isikhathi sokusebenza noma kuyoba nezindaba eziphuthumayo. Isibonelo, indodana yokufaka i-zipper, okuyinto engafake ngengozi lapho i-buttoned.
Futhi, njengekusasa kwasekuseni, ungakwazi ukulungisa ushizi we-cottage nge ukhilimu omuncu namavinini omisiwe. Le nto inempilo kakhulu. Futhi ukunambitheka kwasekuseni okunjalo akusiphansi kunesitolo sesitolo
Lapha, mhlawumbe, nazo zonke izinyathelo ezincane zokupheka ukudla kwasekuseni okusheshayo nokunambitheka ekuseni. Nginesiqiniseko ukuthi unamasu akho okwenza isidlo sasekuseni esisheshayo emndenini wakho, futhi ungayisebenzisa.
Indlela yokupheka i-yoghurt ku-multivariate?
Ukupheka okulula nokumnandi kwamazambane okupheka ku-multivariate
Izitsha zikazwelonke neziphuzo zase-Italy
Indlela yezinto eziphilayo zokulwa nemithonya
I-Casserole ne-turkey ne-spaghetti
Imibono engu-20 yefantasy ukwakheka